Ndị jụrụ okwukwe: ihe osise siri ike nke "ịchụ nta ndị Lutheran" na narị afọ nke XNUMX | Akwụkwọ dị ugbu a
John Ortiz | 06/11/2021 18:50 | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Novela
Onye ekwe ekwe bụ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke onye ode akwụkwọ Valladolid ama ama bụ Miguel Delibes dere. Ediciones Destino bipụtara ya na Spain na 1998. Ọ bụ akụkọ banyere ụdị akụkọ ihe mere eme nke na-egosipụta ihe omume ọjọọ ndị mere n'oge "ịchụ nta ndị Lutherans" na ala Cervantes na narị afọ nke 1999. A na-ewere akwụkwọ a dị ka otu n'ime ọrụ kachasị zuru oke nke onye edemede, nke nyere ya ohere inweta Nrite Narrative National Prize na XNUMX.
Miguel Delibes nwere nnukwu ọrụ agụmagụ, pụtara dị ka otu n'ime ndị na-ede akwụkwọ akụkọ kacha mkpa nke oge Spanish postwar. Akwụkwọ akụkọ ya buru ibu nwere ihe karịrị ọrụ iri isii, gụnyere akwụkwọ akụkọ, mkpirisi akụkọ, edemede, njem na akwụkwọ ịchụ nta. A na-egosipụta ihe ịga nke ọma ya na onyinye iri abụọ ya na nkwanye ùgwù ya, yana ngbanwe nke ọrụ ya na ihe nkiri, ihe nkiri na telivishọn.
1 Nchịkọta nke Ndị jụrụ okwukwe
1.1 Ezinụlọ Salcedo
1.2 Agụụ afọ ime
1.3 Ihe omume dị egwu
1.5 E zigara n'ogige ụmụ mgbei
1.6 Oge siri ike
1.7 Nwa mgbei na onye nketa
1.8 Nnukwu mgbanwe
1.9 Atụghị anya na obi ọjọọ ọgwụgwụ
3 Nchịkọta akụkọ ndụ nke onye edemede, Miguel Delibes
3.2 Ndụ onwe na ọnwụ
3.3 Akwụkwọ akụkọ ndị ode akwụkwọ
Na nchikota nke Onye ekwe ekwe
Ndị Salcedes, Don Bernardo na nwunye ya CatalinaHa bụ di na nwunye nke ezi mmekọrịta ọha na eze, ekele maka azụmahịa ha na akwa woolen. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asatọ nwara ịkpalite - emeghi nke ọma- nye onye nketa ihe onwunwe ya na akụnụba ya. Site n'atụmatụ nke ndị maara. ha na-aga dọkịta Almenara, onye, ​​ruo ogologo oge, na-enyere ha aka n'ụzọ dị iche iche fatịlaịza.
Agụụ afọ ime
N'agbanyeghị na a na-eme usoro dị iche iche. doña Catalina enweghị ike ịtụrụ ime, ya mere o kpebiri ịkwụsị n'echiche ahụ. Obere oge, mgbe olileanya na-efunahụ, nwaanyị nọ na teepu. Don Bernardo nwere nnọọ obi ụtọ na akụkọ ahụ, ebe ọ bụ na e mesịrị jiri nwa nwoke gọzie ha.
Ihe omume dị egwu
N'October 30, 1517, Dona Catherine tụụrụ ime nwa dị mma onye ha mere baptizim dị ka Cipriano. Otú ọ dị,, n'agbanyeghị ọṅụ ọbịbịa na-eweta. ọ bụghị ihe niile bụ obi ụtọ. N'oge ịmụ nwa, nwanyị gosipụtara nsogbu ndị dọkịta enweghị ike idozi, na n'ime ụbọchị ole na ole ọ nwụrụ. E ji nkwanye ùgwù na ịdị ebube lie Oriakụ Salcedo, n'ihi na ọ gbasara onye klaasị na ndịiche ya.
Don Obi gbawara Bernardo mgbe nwunye ya nwụchara ma juo nwa n’ihi na-ewere ya dị ka onye ikpe mara ihe merenụ. N'agbanyeghị nke a, nwoke ahụ ga-enwe lekọta chọọ nọọsụ maka Cipriano. Otú ahụ ka ọ dị hires Minervina, otu nwa agbọghọ dị afọ 15 nke nwa ọhụrụ nwụnahụrụ ya, n’ihi ya, o nwere ike inye nwa nta ahụ ara n’enweghị nsogbu.
E zigara n'ogige ụmụ mgbei
Minervina ọ nọ na-azụ nwa ahụ ruo ọtụtụ afọ. lekọta ya ma nye ya ihunanya nne na m chọrọ. Ebe m dị obere, Cipriano dị ụtọ na nghọta, àgwà ọjọọ maka Don Bernardo, onye chọrọ igbochi ya. Nna ya emeghị mgbalị ọ bụla ịhụ ya n'anya, ka oge na-agakwa, e meghachiri ịkpọasị ahụ. Nke a kpatara nwoke a ime ya -Dị ka usoro ntaramahụhụ - n'ogige ụmụ mgbei.
Oge siri ike
Ọnụnọ Cipriano na ụlọ mbikọ ọ siri ike, ebe ahụ aghaghị ịnagide nhụsianya na mgbakwunye na mmeso ọjọọ. Otú ọ dị, n'ebe ahụ ọ gụrụ akwụkwọ ma nweta ihe ọmụma dị iche iche. N'afọ ndị ahụ, ọ nụrụ banyere mmiri ozuzo mbụ ndị Protestant banyere okpukpe Katọlik na Europe. O sokwa ndị enyi ya na-arụkọ ọrụ ilekọta ndị ọrịa nke ihe otiti ahụ bibiri Castile, bụ́ nke gburu ọtụtụ puku mmadụ.
Nwa mgbei na onye nketa
Ọrịa ọjọọ ahụ metụtara Cipriano nke ọma, ebe ọ bụ nna ya nwụnahụrụ n'aka nke ihe otiti. Mgbe Don Bernardo nwụsịrị, nwa okorobịaugbu a bụ nwa mgbei, bụ naanị ihe eketara nke ezinụlọ ya ihe onwunwe. N'oge na-adịghị anya, ọ weghaara azụmahịa ahụ wee chepụta echiche dị mma nke mere ka ọ baa ọgaranya. Ihe okike ọhụrụ ya - jaket akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ - na-ewu ewu nke ukwuu na ndị mmadụ na ụbara ahịa.
Ndụ nke Cyprian emelitere nke ọma, gụnyere hụrụ ịhụnanya na-esote theo, ọmarịcha nwaanyị ya na ya lụrụ. Ya na ya nwere ezigbo oge. Otú ọ dị, obi ụtọ ji nwayọọ nwayọọ kwụsị, ebe ọ bụ na di na nwunye ahụ enweghị ike ịmụ ụmụ. theo ghọrọ ihe na-achọsi ike na mechara bụrụ nke na-enweghị isi n'uche y e kwetara na ụlọ akwụkwọ ebe n'ikpeazụ ọ nwụrụ.
Atụghị anya na obi ọjọọ ọgwụgwụ
Nke a gbanwere ndụ Cipriano —Otu nwoke ji okpukpe kpọrọ ihe—n’ihi na ọ tara onwe ya ụta maka ihe merenụ, a manyekwara ntaramahụhụ maka ụbọchị ya fọdụrụnụ. Kemgbe ahụ, malitere izute ndị otu Lutheran n'okpuru ala, bụ́ nke ji ezi uche mee ihe iji lanarị Ajụjụ Dị Nsọ.
Eziokwu ya gbanwere mgbe Philip nke Abụọ —Katọlik kwesịrị ntụkwasị obi— ọ nọchiri nna ya na eocheeze, Ọfọn nke a nyere iwu ka ha kwụsị ndị jụrụ okwukwe niile dị n'ala-eze. Nchụso ahụ akwụsịghị akwụsị; ajọ ọnọdụ na-echere ndị Protestant nke oge ahụ bụ́ ndị e jidere ma ghara ịgọnarị okwukwe ha. Ndị weghaara azụ jisiri ike ịlanarị. Otú ọ dị, Cyprian jụrụ ịhapụ ozizi ya, ma jidesie nkwenkwe ya ike ruo ọgwụgwụ.
The Heretic bụ akwụkwọ akụkọ e debere na Valladolid, Spain, na narị afọ nke XNUMX, n'oge ọchịchị Carlos V. Akwụkwọ ahụ Emepụtara ya na ibe 424 yana akụkụ atọ bụ isi kewara n'ime isi iri na asaa n'ozuzu ya. Onye na-akọ akụkọ mmadụ nke atọ maara ihe niile kọwara atụmatụ a, onye na-akọ akụkọ ndụ onye na-eme ihe nkiri, Cipriano Salcedo.
Nchịkọta akụkọ ndụ nke onye edemede, Miguel Delibes
Miguel Delibes Setien A mụrụ ya na October 17, 1920 na obodo Spanish nke Valladolid. Nne na nna ya bụ María Setién na Prọfesọ Adolfo Delibes. Ọ gụrụ akwụkwọ elementrị na Colegio de las Carmelitas n'obodo ya. Mgbe ọ dị afọ 16 ọ gụchara nzere baccalaureate ya na School of Lourdes. Afọ abụọ mgbe e mesịrị —Mgbe agha obodo bisịrị na Spen—, ji aka ya sonye na ndị agha mmiri.
Nkwupụta nke Miguel Delibes.
Na 1939, mgbe agha biri, Ọ laghachiri Valladolid wee malite ịmụ akwụkwọ na Institute of Commerce. Mgbe ọ gụsịrị akara ugo mmụta ya, ọ debanyere aha na Ụlọ Akwụkwọ nke Arts na Crafts iji mụọ Iwu. N'otu oge ahụ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-ese foto na onye na-akatọ ihe nkiri maka akwụkwọ akụkọ North nke Castilla. N'afọ 1942, a kpọrọ ya aha Mercantile Intendant n'etiti Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
Ọ malitere na ụwa agụmagụ na ụkwụ aka nri ekele maka ọrụ ya Onyunyo nke cypress na elongated (1948), akwụkwọ akụkọ nke o nwetara ihe nrite Nadal. Afọ abụọ ka e mesịrị, o bipụtara Ọbụna ọ bụ ụbọchị (1949), ọrụ mere ka ọ na-ata ahụhụ site na ndị Francoist. N'agbanyeghị nke a, onye edemede ahụ akwụsịghị. Mgbe akwụkwọ nke atọ ya gasịrị, Ụzọ ahụ (1950), ewepụtara ọrụ kwa afọ, gụnyere akwụkwọ akụkọ, akụkọ, edemede na ndekọ njem.
Kemgbe February 1973—ruokwa ụbọchị ọ nwụrụ—, Delives jikwa oche "e" nke Royal Academy Asụsụ Spanish. N'ime nnukwu ọrụ ya dị ka onye edemede, ọ nwetara ihe nrite dị mkpa maka ọrụ ya, yana utu aha ukpono causa na mahadum dị iche iche. Ha pụtara na ha:
Onye isi ala Asturias maka akwụkwọ (1982)
Dọkịta na-asọpụrụ causa sitere na Mahadum Complutense nke Madrid (1987)
Nrite mba maka mkpụrụedemede Spanish (1991)
Akara Miguel de Cervantes (1993)
Ihe nrite ọla edo nke Castilla y León (2009)
Ndụ onwe na ọnwụ
Miguel Delibes ebe obibi Ọ lụrụ Ángeles de Castro na Eprel 23, 1946, na onye mụrụ ụmụ asaa: Miguel, Ángeles, Germán, Elisa, Juan Domingo, Adolfo na Camino. N'afọ 1974, ọnwụ nwunye ya nwere akara tupu na mgbe ọ gasịrị na ndụ ya, nke mere na o jiri nwayọọ nwayọọ na-ebipụta akwụkwọ ya. Machị 12, 2010, mgbe ị na-arịa ọrịa cancer ogologo oge, nwụrụ n'ụlọ ya en Valladolid.
Dị ka nke 2007, maka ụbọchị ọmụmụ 87th nke onye edemede, ụlọ ọrụ mbipụta Destino na Círculo de Lectores bipụtara akwụkwọ asaa na-achịkọta ọrụ ya. Ndị a bụ:
Onye edemede, I (2007)
Ihe ncheta na njem (2007)
Onye edemede, II (2008)
Onye edemede, III (2008)
Onye edemede, IV (2009)
Onye na-achụ nta (2009)
Onye nta akụkọ. Onye edemede (2010)
Onyunyo nke cypress na elongated (1948)
Ọbụna ọ bụ ụbọchị (1949)
Ụzọ ahụ (1950)
My arụsị nwa Sisi (1953)
Akwụkwọ akụkọ Hunter (1955)
Akwụkwọ nke onye njem (1958)
Akwụkwọ uhie (1959)
Ise na Mario (1966)
Ilu nke castaway (1969)
Onye isi ocheeze (1973)
Agha ndi nna nna anyi ha (1975)
Ntuli aka nke Señor Cayo (1978)
Ndị dị ọcha dị ọcha (1981)
Akwụkwọ ozi ịhụnanya sitere n'aka nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ (1983)
Akụ ahụ (1985)
Osisi dike (1987)
Nwanyị na-acha uhie uhie na isi awọ (1991)
Akwụkwọ nke onye lara ezumike nká (1995)
Onye ekwe ekwe (1998)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Onye ekwe ekwe